Andro: 3 Febroary 2020
Nanomboka ny lanonana indray ny fananganana Pendik Kaynarca Tuzla Metro Line
Ny filoha İBB Ekrem İmamoğlu dia manome ny laharam-pahamehana amin'ny fampiasam-bola metro araka ny nampanantenainy. Taorian'ny fiaran-dalamben'i Sultanbeyli sy Ataşehir, ny fananganana metro fahatelo, "Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro" dia nanomboka indray. Imamoglu, Mecidiyekoy-Mahmutbey [More ...]
Miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny Bursa Metropolitan Municipality sy Burulaş, mikraoba vaovao 28 nalain'ny Güzel Gemlik Bus sy Minibuscular Cooperative no nampidirina tamin'ny serivisy. Ben'ny tanànan'i Bursa Metropolitan Alinur Aktaş, amin'ny lafiny iray [More ...]
Istanbulites alefa ambanin-dalambe hahazoana fitsangatsanganana azo antoka amin'ny alina
Nahatratra 30 tapitrisa 2019 arivo ireo mpandeha tao anaty 6 volana ny fampiharana amin'ny alàlan'ny lalamby ambanin'ny tany, izay nanomboka ny 1 aogositra 210. Nilaza ny mponina ao Istanbul fa aleony ny metro handeha soa aman-tsara amin'ny alina. Mpikambana ao amin'ny Distrikan'ny Metropolitan Istanbul (IMM) [More ...]
Inona ny Electric Electric amin'izao, Ahoana no hamaritana izany?
Ny onjan'ny herinaratra dia mitovy amin'ny renirano iray, fa tsy molekiola fotsiny mihetsika ao anaty renirano iray, fa ny sombin-javatra voaaro kosa dia mampihetsika conducteur iray. Ny onjan-jiro, ny hafainganam-pandehan'ny fiakarany mikoriana amin'ny tany iray [More ...]
65 isanjaton'ny fananganana Tunnel Zigana no vita
Minisitry ny Fizahantany Turhanor İsmail Ustaoğlu, Solombavambahoaka AK Trabzon Solombavambahoaka Salih Cora, Ben'ny tanàna Trabzon Metropolitan Murat Zorluoğlu, Tale jeneralin'ny làlana Abdulkadir Uraloğlu, président AK an'ny praiminisitra Haydar Revi, Ortahisar [More ...]
ESHOT Hanatanteraka ny herin'ny herinaratra rehetra amin'ny masoandro
Ny ESHOT, izay nanatanteraka ny fantsom-pamokarana herinaratra voalohany tamin'ny roa sy tapany lasa izay, dia manangana telo fanampiny. Miaraka amin'ny fanaterana trano vaovao, ny ESHOT dia hihaona amin'ny filàn'ny herinaratra rehetra avy amin'ny takelaka solar. Izmir Metropolitan kaominina ESHOT [More ...]
Ankara Istanbul Ny fotoana fitsangatsanganana dia ho 30 minitra miaraka amin'ny YHT vaovao
Minisitry ny Turhan, TCDD Tasimacilik AS. Tao anatin'ny kabary nataony tamin'ny Fihaonan'ny General Coordination and Consultation of the General Directorate, dia nilaza izy fa ny orinasa dia iray amin'ireo toby tena mahafinaritra indrindra vao haingana. Ny firenena ara-toekarena, politika, sosialy ary [More ...]
Divriği Nuri Demirağ MYO fananganana tetikasa fanatsarana ny fotodrafitrasa fanabeazana
Sivri Cumhuriyet University Divriği Nuri Demirağ Vokasional Fokontany “Sekoly Vocational Divriği Nuri Demirağ ho fampiroboroboana ny fotodrafitrasa ara-batana sy ny fananana olona toy ny kilasy, laboratoara, atrikasa, fitaovana milina ary fitaovana fampianarana. [More ...]
Fa inona no nitranga tamin'ny tetik'asa fanjairana Nata Vega Metro Project?
Raha ny Ben'ny tanànan'ny Metropolitan'i Ankara Mansur Yavaş dia nilaza fanambarana lehibe momba ny fandaharam-potoana dia nomeny fampahalalana momba ny Tetikasa Metro Ankapark sy Dikimevi Nata Vega, izay lohahevitra nahaliana azy. Ankara Metropolitan ben'ny tanàna Mansur [More ...]
Fanambarana ny toby fiaran-dalamby ao Adapazarı City Center
Ny fizarana teo anelanelan'ny lalamby Adapazarı-Istanbul any Beşköprü sy Donatım dia nambara ho toerana voalohany amin'ny sehatry ny arkeolojia. Raha ny fanazavana voaray, ny lalamby sy ny tranobe misy ao amin'ny Biraon'ny faritra miaro ny lova ara-kolontsaina ao Kocaeli, ny lalamby [More ...]